Vaovao - Fampiharana ny fitsapana mihombo amin'ny ultrasonic madio
Fampiharana ny fitsapana mihetsiketsika ultrasonic amin'ny madio
Fampiharana ny fitsapana mihetsiketsika ultrasonic amin'ny fanadiovana: Noho ny endrika tsy manam-paharoa ny karazana fantsom-boribory dia mety indrindra amin'ny fanadiovana ireo karazana fantsom-panafody rehetra. Ny fotokevitra dia ny fanovana ny angovo herinaratra ho lasa angovo ultrasonic ary ampitaina amin'ny ambaratonga sy ny rano mifanaraka amin'ny fitsipiny manokana. Ny rindrina ao anaty fantsona dia mahatonga azy hanana angovo be. Ny ultrasonic hatairana navoakan'ny ultrasonic mandritra ny fizotry ny fifindrana dia mahatonga ny refy, ny rano ary ny rindrina ao anaty fantsona hanako. Noho ny habetsaky ny haben'ny oscillation ny refy, ny rano ary ny rindrina anatiny amin'ny fantsona, dia mifandona ireo molekiola ao anaty fantsona, ka miteraka hery mahery vaika ary misy fiantraikany eo amin'ny sehatry ny famindrana hafanana. Ny sosona amboniny ambony dia natao ho malemy, voasarika, esorina, hofongorana ary halefa miaraka amin'ny famoahana ireo fitaovana, amin'izay ahatsapantsika ny fanadiovana ny rindrina anaty fantsona amin'ny alàlan'ny famotopotorana mihetsiketsika. Ho fanampin'izany, ny bara mifono ultrasonic dia azo ampiasaina amin'ny fanadiovana ny vatan'ny tanky, ary azo apetraka an-kalalahana amin'ny toerana misy ny fitoeran-drano. Ny fampiasana dia tena malefaka sy mety, ary kely ny habetsahan'ny olona, ​​ary ny fanadiovana dia tsy mamela zoro maty.
Fampiharana ny fitsapana mihetsiketsika ultrasonic amin'ny fitrandrahana fanafody nentim-paharazana sinoa
Ny singa ultrasonic dia azo ampiasaina hanangonana ireo akora ilaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa. Voalohany, ampiana solvent ny fitrandrahana ao anaty fitoeram-bokatra, ary ny fitaovam-pitsaboana sinoa dia potehina na hokapaina ho granula ilaina, ary apetraka ao anaty solvent fanalana; nirehitra ny mpamokatra ultrasonika, napetraka eo an-tampon'ny fitoeram-pitrandrahana ilay fikarohana ultrasonic, ary ny ultrasonic dia avoaka amin'ny solvent, ary ny ultrasonic dia ny 'effet cavitation' ary ny hetsiky ny mekanika ateraky ny solvent dia afaka mamaky tanteraka ny rindrin'ny sela misy ny fitaovana fitsaboana, hany ka ny singa mavitrika dia ao anaty fahalalahana ary levona ao anaty solvent, ary amin'ny lafiny iray hafa dia azo hafaingana ny fivezivezena molekiola ao amin'ny solvent, hany ka alaina ilay solvent. Mifandray haingana amin'ireo akora ilaina amin'ny fanafody izy io, ary mifangaro sy mifangaro.
Ny maripana tsara indrindra amin'ny famotopotorana ultrasonic manetsiketsika amin'ny famoahana ny fanafody dia 40-60 degre Celsius, noho izany tsy ilaina ny mampita ny vilanina hanomezana fanafanana etona, izay ahafahana mitsitsy angovo sy manatsara ny fahalotoan'ny tontolo iainana. Ny tena zava-dehibe dia misy fiatraikany miaro amin'ny akora mavitrika amin'ny zavamaniry hafanana, mora hydrolyzed na oxidized herbs. Ny fizahana ultrasonic dia mihodina mandritra ny 30 minitra mba hahazoana vokatra tena tsara. Ny fahombiazan'ny fitrandrahana dia nihatsara kokoa raha oharina amin'ny fizotran'ny nentim-paharazana, ary tsy voafetra amin'ny firafitry sy ny molekiola entin'ny fanafody raokandro sinoa. Izy io dia mety amin'ny ankamaroan'ny karazana fanafody ahitra sinoa sy akora isan-karazany. Fitrandrahana (ao anatin'izany ny fitrandrahana ranoka misy rano sy fitrandrahana ranoka matevina). Noho izany, ny fampiasana ny fitsapana mihetsiketsika ultrasonic ho an'ny fitrandrahana fanafody sinoa dia nanjary eken'ny orinasa maro fanafody.
Fampiharana ny fitsapana mihozongozona ultrasonic amin'ny fihenan'ny fihenan'ny simika
Ny tendrony aloha an'ny tandrok'adin-tsavona ultrasonic dia mifamatotra akaiky amin'ny rindrina ivelany amin'ny kettle na ao an-davaky ny vatan'ny vilany. Ny transducer ultrasonic dia afaka mandefa ultrasonic amin'ireo reactants simika ao anaty lavaka, ary ny ranon-tsaboina dia ultrasonic. Ny fihenan'ny rongony dia mety miteraka fiovana eo amin'ny fiasan'ny rafitra fanehoan-kevitra, manimba ny rafitry ny réactants simika ao anaty lavaka, mamokatra hafanana ambony tampoka ary tsindry ambony ampy hanombohana ny fihenan'ny simika, hanangana ivon-angovo avo eo an-toerana ary hampiroborobo ny fandrosoana tsara amin'ny fihetsika simika. Ny antony lehibe mahatonga ny fihetsika catalytic an'ny famotopotorana mihetsiketsika.
Ny vokatra faharoa an'ny ultrasonic toy ny fikororohana mekanika, emulsification, diffusion, crushing, sns. Dia samy mahasoa amin'ny fifangaroan'ny reactants avokoa. Ny valala mihetsiketsika ultrasonic dia mampiasa transducers mifantoka amin'ny herinaratra mahery vaika, izay mety hahatonga ilay fitaovana hihetsika mahery vaika ary hanafainganana. Ny famindrana raharaha dia afaka manolo ny fikorontanana mekanika nentin-drazana. Mazava ho azy, amin'ny fampiharana azo ampiharina, tsara kokoa ny mampiasa ilay mixer elektrika mba hanafainganana ny fihetsika.
Fampiharana ny fikarohana ultrasonic manetsiketsika amin'ny anti-scaling
Raisintsika ohatra ny exchanger hafanana. Ny famotopotorana mihetsiketsika ultrasonic dia napetraka matetika ao amin'ny fidiran'ny mpampita hafanana. Izy io dia fehezin'ny flange connection sy valizy fanaraha-maso. Izy io dia azo ampiasaina hanamboarana sy hitazomana ireo fitaovana ultrasonic nefa tsy hijanona ny famokarana. Ny fitsipika lehibe indrindra dia ny ultrasonic mamindra sy mamokatra angovo mandritra ny dingan'ny fandefasana, ary ny molekiola toy ny refy, ny rano ary ny fifanakalozana hafanana vy dia mahazo angovo amin'ny fizotran'ny hovitrovitra, ary ny rano ao amin'ny fantsom-pifanakalozana hafanana dia miteraka hovitrovitra sy fifandonana mafy sady mahazo angovo. Ny molekiola ao anaty rano misy sira an-tsy voajanahary isan-karazany izay tsy mitombina ao aminy dia miteraka miboiboika (cavitation) maro be, mamorona lava-kavitry ny molekiola ao anaty rano. Ireo bubble ireo, rehefa mivelatra haingana ary mihidy tampoka, dia mamokatra atmosfera an'arivony an'arivony sy fiaramanidina haingam-pandeha hatramin'ny 400 km / ora sy angovo mahery mihoatra ny 5000 k. Ireo angovo ireo dia manimba ny fitambaran'ny ion-tsosialy sy miiba miaraka amin'ny radika asidra ary manimba ny fananganana ambaratonga. Fepetra ahazoana manohitra ny scaling.
Fampiharana ny fitsapana mihombo amin'ny ultrasonic amin'ny fitsaboana rano
Ny famotopotorana mihetsiketsika ultrasonic dia manangona ny fizotran'ny ultrasonic mba hampifantoka ny angovo, ary ny hamafin'ny feo mahery dia azo raisina amin'ny tarehy farany amin'ny taratra ultrasonika. Noho ny vokatry ny fanangonana angovo an'ny tandroka, dia nohatsaraina kokoa ny hakitroky ny angovo feo; ny fanehoan-kevitra dia azo noforonina araka ny tokony ho izy araka ny hakitroky ny angovo akustika. Ny tarehy faran'izay mamoaka ny famotopotorana dia natao ho azo esorina avokoa, mba hahafahana misafidy ny haben'ny tarehin-tarehy mety ho voafantina amin'ny fotoana rehetra arakaraka ny hamafin'ny feony. Mandritra izany fotoana izany, rehefa voahitsakitsaka mafy amin'ny rongony ilay probe dia ny ampahany farany ihany no mila soloina fa tsy mila manolo ny vidiny. Fitsapana hovitrovitra manontolo. Ny famotopotorana mihetsiketsika ultrasonic dia azo ampiasaina mba hikarakarana ireo maloto taolam-biby tsy miova. Nampiasaina izy ireo tao anaty fitambarana aromatika monositika, hydrocarbons aromatika polycyclic, phenol, hydrocarbons klorinida, hydrocarbons chlorida, asidra organika, loko, alikaola, ketône, sns. Fikarohana momba ny fitsaboana rano maloto ary nahazo vokatra tsara. Amin'ny rano maloto indostrialy, ny fitaovana dia nampiasaina hanasitranana rano maloto vita amin'ny papermaking, fanontana pirinty sy fandokoana rano, rano maloto tannery, rano maloto koka, rano maloto fanafody, fitrandrahana tanimanga, sns., Ary nahitana vokatra tsara.
Ho an'ny fanontanina momba ny vokatra na pricelist anay dia mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.fanadihadiana